Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » I-UK iyayekisa imithetho yokungena kwabaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-UK iyayihlaziya imithetho yokungena yabaphambukeli abagonyelweyo
Inkqubo yangoku yokukhanya kwezibane iyakuthatyathelwa indawo luluhlu olunye olubomvu lwamazwe kunye nemimandla eya kuthi iqhubeke nokubaluleka ukukhusela impilo yoluntu, kunye neendlela ezilula zokuhamba zokufika ezivela kwihlabathi liphela ukusukela ngoMvulo we-4 kweyeDwarha ngeye-4 kusasa.
I-UK iyakunciphisa iimfuno zovavanyo zabahambi bamanye amazwe abafanelekileyo abagonywayo ekufikeni kwabo.
Abagibeli abafanelekileyo abagonywe ngokupheleleyo baya kuba nakho ukuthatha indawo yovavanyo lwabo losuku lwe-2 ngovavanyo lokuhamba okuncinci.
Nabani na ovavanya ukuba une-HIV uyakufuna ukuzahlula kwangoko kwaye athathe uvavanyo lwePCR oluqinisekisayo.
Unobhala Wezothutho wase-UK uGrant Shapps ubhengeze namhlanje ukuba ukuqala nge-4 ka-Okthobha ka-2021, urhulumente wase-UK uyayiphungula imimiselo yokungena kunye neemfuno zeendwendwe ezivela kwamanye amazwe.
UNobhala wezoThutho wase-UK uGrant Shapps
Inkqubo entsha eyenziwe lula yohambo lwamazwe aphesheya kukhangelwa impumelelo yokukhutshwa kokugonya kwasekhaya e-UK, iya kubonelela ngozinzo olukhulu kushishino nakubakhweli.
Iimfuno zovavanyo ziya kuncitshiswa kubahambi abagonyiweyo abafanelekileyo, abangasayi kuphinda bathathe i-PDT xa besiya eNgilane ukusukela ngoMvulo we-4 Oktobha 4am.
Ukusukela ekupheleni kuka-Okthobha, abagibeli abagonyiweyo abagonyiweyo kunye nabo banesitofu sokugonya esivunyiweyo kwiqela elikhethiweyo lamazwe angabomvu baya kuba nakho ukuthatha indawo yovavanyo lwabo losuku lwe-2 ngovavanyo lokuhamba okuncinci, ukunciphisa iindleko zovavanyo ekufikeni eNgilani. Urhulumente ufuna ukwazisa oku ngasekupheleni kuka-Okthobha, ejonge ukuba ibe yindawo apho abantu bebuya kwikhefu lekota.
Nabani na ovavanya ukuba une-HIV uyakufuna ukwahlula-hlula kwaye athathe uvavanyo lwe-PCR oluqinisekisayo, ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo kumhambi, ezinokuthi zilandelelaniswe ngokwemvelo ukunceda ekuchongeni izinto ezintsha.
Ukuvavanywa kwabakhweli abangafumananga isitofu abasuka kumazwe angabomvu kuya kubandakanya iimvavanyo zaphambi kokuhamba, usuku lwe-2 kunye novavanyo lwe-PCR yosuku lwe-8. Uvavanyo lokukhupha luhlala lukhetho lokunciphisa ixesha lokuzikhetha.
Abakhweli abangaziwa njengabagonywe ngokupheleleyo zizitofu ezigunyazisiweyo kunye nezatifikethi eziphantsi eNgilaniImithetho yokuhamba yamazwe aphesheya, kusafuneka bathathe uvavanyo lwangaphambi kokuhamba, usuku lwe-2 kunye nosuku lwe-8 kuvavanyo lwe-PCR kunye nokuzikhetha bodwa iintsuku ezili-10 ekubuyeni kwabo kuluhlu olungabomvu ilizwe phantsi kwenkqubo yokuhamba emacala mabini . Uvavanyo lokukhululwa luya kuhlala lukhethwa kubagibeli abangagonywanga abanqwenela ukunciphisa ixesha labo lokuba bodwa.
Senza ukuba kube lula ukuvavanya uhambo. Ukusukela nge-4 ka-Okthobha, ukuba ugxothwe ngokupheleleyo [awugonywanga] awuzukufuna uvavanyo lwangaphambi kokufika ngaphambi kokufika eNgilane usuka kwilizwe elingabomvu kwaye ukusuka ngo-Okthobha, uya kuba nakho ukuthatha indawo yovavanyo lwe-2 PCR ngokuhamba kancinci, "Unobhala uGrant Shapps utwitter.
USajid Javid, uNobhala wezeMpilo kunye noNonophelo lwezeNtlalontle, uthe: “Namhlanje siyenze lula imithetho yezohambo ukuze ibelula ukuqondwa nokulandelwa, kuvulwa ukhenketho kunye nokunciphisa iindleko zokuya phesheya.
"Njengoko amalinge okugonya eqhubeka ngokukhawuleza kwaye abantu abaninzi befumana ukukhuselwa kwesi sifo soyikekayo, kulungile ukuba imigaqo nemimiselo yethu iqhubeke."
NgoSeptemba 26, 2021 kwi-07: 04
Inkqubo yangoku yokukhanya kwezibane iya kuthatyathwa luluhlu olunye olubomvu lwamazwe kunye nemimandla eya kuthi iqhubeke nokubaluleka ukuze kukhuselwe impilo yoluntu, kunye neendlela ezilula zohambo zokufika ezivela kwihlabathi liphela. Iluncedo kakhulu kuthi.